Ahoana ny fomba famoronana torapasika? Lazainay aminao anio | Vaovao momba ny dia
Ahoana ny fomba famoronana torapasika?
Ny rehetra dia tsidihina amin'ny fahavaratra ary miankina amin'ny sainam-pirenena daholo rehefa manomboka tonga ny hafanana, saingy efa nanontany tena ve ianao hoe: Ahoana ny fomba famoronana torapasika? Amin'ny fampianarana ambaratonga faharoa dia fantatray fa nomena ity lohahevitra ity fa raha nanadino azy ianao dia mbola tsy namaky azy io na mbola tsy nanontany tena mihitsy, anio dia hanana fotoana ianao noho ity lahatsoratra ity hahafantatra ny fomba ahazoantsika ireo morontsiraka mahafinaritra sy feno olona ireo mandritra ny fahavaratra. volana.
Ny morontsiraka sy ny fiforonany
Ny morontsiraka dia fananganana voajanahary ny asany dia ny miaro ny morontsiraka amin'ny fivontosana. Izy ireo dia afaka mahavita an'io noho ny firafiny miovaova izay mifoka tsara ny heriny.
Izy ireo dia miorina indrindra amin'ny fasika apetraka avy amin'ny renirano, lohasaha na boulevards. Hitanay ihany koa ny sisa tavela amin'ny hantsam-bato, akorandriaka ary haran-dranomasina noho ny fikaohan'ny fitarihan'ny rano. Ny onja dia tompon'andraikitra amin'ny fanangonana ny fasika eny amoron-dranomasina.
El surf dia ny fivezivezen'ny rano novokarin'ny hetsiky ny rivotra. Raha mamely ny torapasika hatrany ny onja, dia mihetsika mihetsika mandroso sy miverina ny fasika. Ary raha tonga tampoka ny onja dia hisy ihany koa ny onja lava-pohy izay hitarika fasika bebe kokoa manamorona ny morontsiraka.
Raha ny haben'ny fasika miditra amoron-dranomasina dia mitovy amin'ny habetsaky ny ravina, hoy izahay tora-pasika inona ny amin'ny fifandanjana. Raha ny haben'ny fasika miditra dia lehibe noho io miala io, dia a mitombo amoron-dranomasina. Raha, etsy andaniny, vitsy ny fasika miditra noho ny ravina, dia holazaintsika fa ny tora-pasika it is amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Andao isika hikarakara ny morontsirakintsika satria miankina amin'izy ireo ny kalitao sy ny fahaveloman'ny morontsiraka. Ny lahatsoratra manaraka dia momba ity fikarakarana ity sy ireo toro-hevitra homenay anao hampiasana azy tsara. Aza atsahatra ny famakiana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ahoana ny fomba famoronana torapasika?
Golden Sands, morontsiraka tsara indrindra any Bulgaria